Ezinye izibane ezingenoqhushumbo Abavelisi-eTshayina Ezinye izibane ezingaqhushumbayo ababoneleli & neFactory
BGD series Explosion-proof high pole isibane
1. Isetyenziswe ngokubanzi kwiiprojekthi zokhuselo lwesizwe, ubunjineli be-aerospace, ubunjineli bezibuko, ukugcinwa, indawo enkulu yokugcina impahla eyingozi, imigodi ye-oyile kunye nemizi-mveliso yepetrochemical ifuna indawo enkulu yeendawo zokukhanyisa ezisembindini;
2. Isebenza kwimoya yerhasi eqhumayo kwiZowuni 1, Zone 2;
3.Isebenza kwi-II A, IIB, II C yegesi eqhumayo kwi-atmo-spheres;
5. Isebenza kwiimfuno zokukhusela kwiindawo eziphezulu, ezifumileyo.
3. Umoya oqhumayo: iklasi IIA, IIB, IIC;
4. Ifanele indawo yothuli oluvuthayo kwindawo ye-21, 22;
5. Ifanelekile kwiindawo ezifuna ukukhuselwa okuphezulu, ukufuma kunye negesi ephazamisayo.
6. Ifanelekile ukukhanyisa ukukhanya kweselula.
1. Isetyenziswe ngokubanzi kwi-oyile, ukucocwa kwe-oyile, ishishini lemichiza, imikhosi kunye nezinye iindawo ezinobungozi kunye namaqonga e-oyile e-offshore, iinqwelo ze-oyile kunye nezinye iindawo zokukhanyisa eziqhelekileyo kunye nokukhanyisa okusebenzayo;
FCBJ series Explosion-proof acoustic-optic annunciator
1. Isetyenziswa kakhulu kuphononongo lwe-oyile, ukusulungekiswa kwe-oyile, iikhemikhali, umkhosi kunye nezinye iindawo ezinobungozi kunye namaqonga e-oyile aselunxwemeni, iinqwelo ze-oyile kunye nezinye iindawo ezinobungozi kwi-alam yomqondiso wengozi okanye njengophawu lomqondiso;
ABSg series Explosion-ubungqina itanki yokuhlola isibane
1. Isetyenziswe ngokubanzi ekutsalweni kwe-oyile, ukusulungekiswa kwe-oyile, iikhemikhali, umkhosi kunye nezinye iindawo ezinobungozi ngeenjongo zokukhanya kwendawo;
3. Umoya oqhumayo: iklasi ⅡA,ⅡB, ⅡC
5. Ifanelekile kwiimfuno eziphezulu zokukhusela, iindawo ezimanzi;
1. Isetyenziswa kakhulu kuphononongo lwe-oyile, ukusulungekiswa kwe-oyile, iikhemikhali, umkhosi kunye nezinye iindawo ezinobungozi kunye namaqonga e-oyile aphesheya konxweme, iinqwelo ze-oyile kunye nezinye iindawo njengenjongo yesilumkiso;